ဤအ WIC အစားအစာများကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်နယူးအကြံပြုချက်များထဲက Check | JPMA, Inc
ဤအ WIC အစားအစာများကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်!
ရောနှော, Coates, လဲလှယ်ရေးနှင့်ထိပ်တန်း!
တိုင်း WIC အစားအစာဖြည့်မယ့်အရသာအစာအာဟာရအခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။
ပရိုတိန်း, စွမ်းအင်ထောက်ပံ့နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အရိုး, ကြွက်သား, အရိုးနု, အရေပြား, သွေး, အင်ဇိုင်းတွေနှင့်ဟော်မုန်းတည်ဆောက်ကူညီပေးသည်ရာ။
ထုံးဓါတ် , သင့်ခန္ဓာကိုယ်ခိုင်မာတဲ့သွေ့ခြောက်သောအရိုးတည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းနည်းကူညီပေးသည်ရာ (အရိုး-in ကိုဆော်လမွန်ငါး / ငါးမှ)
အိုမီဂါ3ဖက်တီးအက်ဆစ်(စည်သွတ်ဆော်လမွန်ထံမှ), နှလုံးရောဂါတားဆီးနှင့်သင့်စိတ်ဓါတ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီစေခြင်းငှါကူညီပေးသော။
သာ. ကောင်း၏ကျန်းမာရေးအဘို့အစည်သွတ်ငါး Hack။ ငါးတစ်နေ့တာဘယ်အချိန်မဆိုအဘို့ကြီးစွာသောအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ပရိုတိန်း option တစ်ခုဖြစ်သည်။
ခေါက်ဆွဲဟင်းလျာများသို့မဟုတ် casseroles သို့အဆင်သင့်ငါးမွှေ
လွင်ပြင်ဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ်သင့်တူနာငါးသုပ်ဘို့ mash အဖြူပဲမျိုးစုံများအတွက် Mayonnaise ဖလှယ်ရန်
အကောင်းတစ်ဦး texture အဘို့အနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသီးနှံနှင့်ဒယ်အိုးကြော်နှင့်အတူအင်္ကျီတူနာငါးသို့မဟုတ်ဆော်လမွန် Patti
သင့်ရဲ့ omelets သို့အဆငျသငျ့ဆော်လမွန်ငါးရောထွေး
တစ်ဦးအမြန်နေ့လယ်စာများအတွက် hummus နှင့်အဆငျသငျ့ဆော်လမွန်ငါးနှင့်အတူတစ်ဖွဲ့လုံး-ဂျုံ pita Top ။
. အဘယ်ကြောင့်နံနက်စာစီရီရယ်? သူတို့ကတစ်ဦးအကြီးအရင်းမြစ်များကို:
ဖောလိတ် / ဖောလစ်အက်ဆစ်, ဆဲလ်ကြီးထွားနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတူကူညီပေးသည်ရာ။
အမှငျြ ပုံမှန်သင်သည်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်နှင့်သင်အစာစားပြီးနောက်အပြည့်အဝခံစားရကူညီပေးသည်ရာ, (မြေတပြင်လုံး၌စပါးကိုရှေးခယျြစရာမြားမှ) ။ အခြို့သောအမျှင်ကိုလည်းထိန်းချုပ်သောအသွေးကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုကူညီခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်သည်။
သာ. ကောင်း၏ကျန်းမာရေးများအတွက်နံနက်စာသီးနှံ Hack ။ နံနက်စာသီးနှံသင်အရသာမိသားစုအစားအစာများအပေါ်ပိုက်ဆံကယ်တင်ကူညီရန်နံနက်စာပြင်ပနည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လဲလှယ်ရေးထိုသူတို့အဘို့ပဌနာမဆိုစာရွက်အဘို့အ breadcrumbs နှင့်များအတွက်သီးနှံနှိပ်စက်။
စျေးကြီး croutons နှင့်သုပ် toppers အဘို့အဝါရင့်ပြောင်းဖူးသို့မဟုတ်ဆန်အလွှာဖလှယ်။
ရောနှော meatballs, meatloaf, ဒါမှမဟုတ်အသား Patti ချက်ပြုတ်နည်းများသို့ဆန်, ပြောင်းဖူး, ဒါမှမဟုတ်ဂျုံအလွှာသီးနှံနှိပ်စက်။
ထောပတ်သို့မဟုတ်ဒိန်ခဲနှင့်အတူဖြန်းနှင့်အတူစိတ်ပျက်သီးနှံမိုးဖွဲနှင့်အတူထိပ်တန်းအချိုပွဲသို့မဟုတ် casseroles ။
အဘယ်ကြောင့် Tofu? Tofu တစ်ဦးအနိမ့်အဆီအရင်းအမြစ်ထောက်ပံ့:
သာ. ကောင်း၏ကျန်းမာရေးများအတွက် Tofu Hack ။ Tofu အလွယ်တကူသင်သည် Lactose ကိုသညျးမခံနိုငျလြှငျကအကြီးအသားအဘို့အအစားထိုး, ကြက်ဥ, ဒါမှမဟုတ်နို့ထွက်အောင်တစ်စာရွက်အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အရသာပေါ်ကြာပါသည်။
ပိုပြီးအနိမ့်အဆီပရိုတိန်းကိုထည့်သွင်းဖို့ဖျော်ရည်အတွက်ဒိန်ချဉ်အဘို့အ silken tofu ၏ထက်ဝက်ခွက်ဖလှယ်။
creamy ဟင်းချိုချက်ပြုတ်နည်းများအတွက်လေးလံသောမုန့်များအတွက် silken tofu ဖလှယ်။
ဆီဥကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဘောဇဉ်ထဲကပိုပြီးစားသုံးခြင်းရဖို့ Taco, casseroles, ဖက်ထုပ်နှင့်အခြားချက်ပြုတ်နည်းများအတွက်မြေပြင်အသားထဲသို့အချို့အကျအဆုံးများပျော့ tofu ရောမွှေပါ။
လဲလှယ်ရေး, ကြက်ဥအဘို့မြဲမြံစွာ tofu အကျအဆုံးများရာသီနှင့်အရသာနံနက်စာအဲန်ဂျီအိုများစေကုန်တယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထည့်ပါ။
လဲလှယ်ရေး¼မုန့်ဖုတ်ချက်ပြုတ်နည်းများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကြက်ဥအဘို့အခွက်ကို silken tofu ။
အမှငျြ, အရာပုံမှန်အစည်းအဝေးသငျသညျစောငျ့ရှောကျကူညီပေးသည်နှင့်သင်အစာစားပြီးနောက်အပြည့်အဝခံစားရကူညီပေးသည်။ အခြို့သောအမျှင်ကိုလည်းထိန်းချုပ်သောအသွေးကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုကူညီခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်သည်။
Bean နှင့်ပဲဟင်းသည် သာ. ကောင်း၏ကျန်းမာရေးဘို့ Hack ။ သူတို့စည်သွတ်ထက်ချက်ပြုတ်ရန်အချိန်ပိုမိုယူနေစဉ်, အခြောက်ပဲထိုချောင်းမြောင်းကျိုးနပ်သောကြွယ်ဝသောအရသာရှိသည်။
ညွှန်ကြားချက် package ပြီးတော့နှေး cooker ထဲမှာအနိမ့်ပေါ်ညဥ့်ကိုအုပ်စိုးချက်ပြုတ်သည်နှင့်အညီပဲမျိုးစုံစုပ်ယူထားသည်။
Cook ကတနင်္ဂနွေပေါ်တွင်အခြောက်ပဲတစ်ကြီးမားသောအိုးနှင့်လွယ်ကူသောအသုံးပြုမှုပတ် 1 ကွတ်ထုတ်ယူပြီးရေခဲသေတ္တာအိတ်၌သူတို့အေးခဲ။
သငျသညျခြောက်သို့မဟုတ်အဆင်သင့်ပဲနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ဖြစ်စေ, သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုအိုင်ဒီယာထဲက run ဖို့လွယ်ကူသည်, ဤနေရာတွင်သင်ကပဲမျိုးစုံနှင့်အတူချက်ပြုတ်၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားကူညီရန်အချို့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါသည်:
အပိုပရိုတိန်း, အရသာနှင့် texture ဘို့ပဲဟင်း, အနက်ရောင်ပဲ, ဒါမှမဟုတ် garbanzo ပဲမျိုးစုံနှင့်အတူထိပ်တန်းသုပ်။
အဆိုပါချက်ပြုတ်နည်းများထဲကပိုပြီးစားသုံးခြင်း get နှင့်အစားအစာ၏ texture တိုးတက်လာဖို့ meatballs, meatloaf, ဒါမှမဟုတ်ဘာဂါသို့ mash ပဲမျိုးစုံရောမွှေပါ။
လဲလှယ်ရေး Mayonnaise များအတွက်အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်ပဲမျိုးစုံ mashed ။
သာ. ကောင်း၏ကျန်းမာရေးသည်မြေပဲထောပတ်ကို Hack။ မြေပဲထောပတ်အရသာအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
တစ်ဦး savory အသီးသို့ကျဆင်းလာအဘို့အဒိန်ချဉ်နှင့်အတူရောထွေး
အပိုပရိုတိန်းနှင့် savory ကန်များအတွက်ဖျော်ရည်ထဲမှာရောထွေး
တစ်ဦး savory နံနက်စာများအတွက်မြေပဲထောပတ်တစ်မိုးဖွဲနှင့်အတူထိပ်တန်းနံနက်စာသီးနှံသို့မဟုတ် oatmeal
ရည်များအတွက်လဲလှယ်ရေးမြေပဲထောပတ်, ထောပတ်, waffles, ကင်နှင့်အာဖရိကအပေါ် cream ကိုဒိန်ခဲ
ဗီတာမင် D ကို, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကယ်လစီယမ်ကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်ကူညီပေးသည်ရာ
ကျန်းမာတဲ့ဘက်တီးရီးယား သင့်ရဲ့အစာခြေကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည်ကို (လည်း probiotics ကိုခေါ်) ။
သာ. ကောင်း၏ကျန်းမာရေးသည်ဒိန်ချဉ်ကို Hack ။ ဒိန်ချဉ်မှာပရိုတိန်းဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောအဆီပါတဲ့အစားအစာကိုအစားထိုးဘို့ကြီးသောဖြစ်ပါတယ်။
အသီးဖျော်ရည်ထဲသို့လွင်ပြင်ဒိန်ချဉ်ရောထွေး, သို့မဟုတ် crunchy ချိုမြိန် parfaits အဘို့အသီးများနှင့်သီးနှံနှင့်အတူအလွှာ
အရသာထပ်ထည့်ဖို့မြေပဲထောပတ်, mashed အသီး, ဒါမှမဟုတ် mash ထောပတ်သီးနှင့်အတူလွင်ပြင်ဒိန်ချဉ်ရောထွေး
ထို့နောက်အင်္ကျီကိုကြက်သားသို့မဟုတ်ငါးဒိန်ချဉ်အတွက်အစားကြက်ဥနှင့် crispy မီးဖိုကြော်ဟင်းလျာများအဘို့အနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသီးနှံနှင့်မုန့်ဖုတ်ထဲမှာလှိမ့်
ထိုသို့မခေါ်ကြောင်းချက်ပြုတ်နည်းများများအတွက် buttermilk နှင့်အတူအနည်းငယ်နို့နှင့်ရောလဲလှယ်ရေးလွင်ပြင်ဒိန်ချဉ်
အဘယ်ကြောင့်အသီးဖျော်ရည်? WIC သီးဖျော်ရည်ကိုရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များကို:
ဗီတာမင် C ကို, သင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီခြင်းနှင့်အနာကနေအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေမည်အကြောင်းအရာ။ ဗီတာမင် C ကလည်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်သံကိုစုပ်ယူကူညီခြင်းနှင့်ကင်ဆာရောဂါအချို့အမျိုးအစားများအနေဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အားကာကွယ်ရန်ကူညီပေးသည်တစ်ခုဓါတ်တိုးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။
သာ. ကောင်း၏ကျန်းမာရေးများအတွက်သီးဖျော်ရည်ကို Hack။ ဖျော်ရည်အစားအသောက်အမျိုးမျိုးမှတစ်ဦးသဘာဝကျကျချိုမြိန်အရသာဖြည့်စွက်အဘို့ကြီးစွာသောပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
သုပ်လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်ကိုတစ်ရောစပ်များအတွက်တစ်သင်းလုံးကကစားသမား, mashed ထောပတ်သီးနှင့် cilantro ထွက်ဖလှယ်ရန်
ကြက်သား marinades စေရန်လွင်ပြင်ဒိန်ချဉ်များနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အနည်းငယ်သီးဖျော်ရည်ကိုရောမွှေပါ။
နူးညံ့သောသည်အထိပန်းသီးသို့မဟုတ်လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်အတွက်အသီးသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တကျီကျီကအရသာ glaze နှင့်အတူအင်္ကျီကိုပန်းသီး, ချိုမြိန်အာလူး, ဒါမှမဟုတ်မုန်လာဥနီ, ။
ဒိန်ချဉ်နှင့်ဖျော်ရည်၏တန်းတူပမာဏရောထွေးနှင့်တစ်ဦး drinkable ဒိန်ချဉ်ရေစာလုပ်ချောသည်အထိမွှေပေးပါ။